Dalka oo maanta ay ka bilaabanayso Baroor diiq loo samaynayo Madaxdii ku geeriyootay shilkii diyaaradeed. | Starfm.co.ke	Tuesday, May 21st, 2013	Home
Dalka oo maanta ay ka bilaabanayso Baroor diiq loo samaynayo Madaxdii ku geeriyootay shilkii diyaaradeed.
Share11.June.2012:- Madaxwayne Mwai Kibaki ayaa maanta hogaamin doona koox sare oo dowlada ka tirsan kuwaasi oo u tacsiiyeen doona Qoysaskii ay ka geereeyodeen wasiirkii Amniga Gudaha Pro George Saitoti iyo kuxigeenkiisii Orwa Ojode oo Maalinkii Shalay ay diyaaradi kula Burburtay Kaynta Ngong.
Wadanka ayay sidoo kale maanta ka bilaabatay seddex maalmood oo baroor diiq ah taasi oo loo samaynayo geeridii ku timid masuuliyiintaasi,waxaana isi soo daraya Qoraalada iyo Hadalada Tacsida ah ee loo dirayo.
Sidoo kale waxaa hoos loo dhigayaa sedexdaasi maalmood Calanka Wadanka Kenya si Maalmaha Baroor diiqda ah Qaranka laga dareemo.
Raisul Wasaare Raila Odinga ayaa waxa uu sheegay in baaritaano ku saabsan sababtii dhalisay shilka diyaarada ay iminka socdaan si dhaqso ahna loo soo saarayo arimahaas.
Sidoo kale wasiirka dhaqanka iyo hidaha William Ole Intimama ayaa ku baaqay in arintani shilka diyaarada baaritaan buuxo lagu sameeyo .